ကားထဲတွင် fuck ဆိုတဲ့ဖို့အကောင်းဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာထူး • Apricots®
ကားထဲတွင် fuck ဆိုတဲ့ဖို့အကောင်းဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာထူး
အဘယ်သူသည်သင်တို့ကိုအဝတ်လျှော်စက်၏ထိပ်ပေါ်မှာ, မီးဖိုချောင်ထဲမှာ, ရေချိုးခန်းအတွင်းတစ်ဦးဆိုဖာပေါ်တစ်အိပ်ရာပေါ်မှာလုပျနိုငျသညျ့အခါကားထဲတွင်လိင်ရှိသည်ဖို့လိုလား ... ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့မိဘများနှင့်အတူအသက်ရှင်လျှင်, သင်၏အစ်ကိုတို့သို့မဟုတ်သင့်အခန်းဖော်သိရကြလိမ့်မည် သငျသညျပူနေအဆ, အခွအေနအေသငျသညျ fuck ဆိုတဲ့ခွင့်ပြုမထားဘူး။ အခါသမယအပေါ်သေချာအိမ်တော်ကိုမြင်ကြပြီနဲ့သင်ဤသည်ငါ့ဥစ္စာဖြစ်၏ဟုပြော, ဒါမှမဟုတ် masturbate သို့မဟုတ် မည်သူမဆိုသင်လိုချင်သော fuck ဆိုတဲ့ သို့မဟုတ်လုပ်နိုင်တဲ့။ ငါတို့ရှိသမျှသည်စာသားကိုနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ follamigo တစ်ခု Message ပေးပို့ဖို့အချိန်ရှိခဲ့ကြပြီငါတယောက်တည်းပေါ့ငါ့အိမ်ကိုလာကြပြုနိုင်ပါတယ်။ ငါ့ထံသို့ငါတစ်ချိန်ချိန်သူတို့တံခါးကိုမှတဆင့်လာမယ့်ခဲ့သည်နှင့်အရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်စဉ်းစားကျွန်မရဲ့မိဘတွေအတွက်အိပ်ရာပေါ် fucking ငါ့ကိုတထောင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ရစ်ကီမာတင်ဂျနီဖာလိုပက်ဇ်နှင့် Wisin y က Yandel နဲ့သူ့ရဲ့သီချင်းထဲမှာပြောပါတယ်တူသောငါအလုအယက် adrenaline ။
သငျသညျအာရုံကြောတွေအိမ်ရှေ့တံခါးသို့မဟုတ်အခန်းတစ်ခန်းဖွင့်လှစ်ပိုသတိထားမိနေသောသူတစ်ဦးဦးဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်တို့သည်နောက်ရွေးချယ်မှုရှိပါကဒါပေမယ့်အဖြေကားထဲတွင် fuck ဆိုတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်များတွင်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ကိုအရမ်းပူစေသည်ပေမယ့်လက်တွေ့ဘဝအခြားဖြစ်ပါသည်, ထိုကားထဲတွင် Nigui-Nigui လေ့ကျင့်ပထမဦးဆုံးသင်တစ်ဦးအဆင်ပြေအနေအထားရှာပြီးညစ်ပတ်ဖို့ကားမကြိုးစားပြီးတော့, လက်ျာရာအရပျကိုရှာရှိသည်, လွယ်ကူသည်မဟုတ် အထူးသဖြင့်သင့်ရဲ့မိဘ၏ကားတစ်စီးလျှင်အဘယ်သူမျှသဲလွန်စချန်ထားရန်။ သတ္တုတွင်း၏မိတ်ဆွေတစ်အကြောင်းကိုစကားပြောဘယ်တော့မှ, သားရေ၏နောက်ကျောထိုင်ခုံခဲ့ရပြီးတစ်ဦးမဟုတ်ဘဲသံသယဖြစ်ဖွယ်အမှတ်အသားဖြစ်ခဲ့သည်။
ကားထဲတွင် fuck ဆိုတဲ့အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်, ဘီးကြိုးစားကြဗဟို၏ပိုကောင်းကဏ္ဍများကိုအဘယ်သူမျှမကြည့်ရှုနိုင်နှင့်ကိုအပြစ်ပေးမယ့်အရပျ၌ရပ်ထားကြပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်, ကိုအပြစ်ပေး, ထိုသူတို့ကားထဲတွင်လိင်ဆက်ဆံဘို့ဒဏ်ရိုက်နိုင်သည့်အတွက်တချို့မြို့ကြီးများနှင့်ပြည်နယ်များရှိပါသညျ။ ဥပမာတစ်ခု Lugo ဖြစ်ပါသည်, သူတို့ 3000 €အများပြည်သူလမ်းများပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်လုပ်ဘို့သင့်ကိုအပြစ်ပေးရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
သင်ကားထဲတွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖန်ဆင်းဘယ်တော့မှင့်ဆိုပါက, ဧကန်အမှန်အသင်သည်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုအံ့သြနှင့်သင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်တစ်ဘေးအန္တရာယ်မရှိ, ကြိုးစားခဲ့ကြပေမယ့်ကောင်းကောင်းအခြေအနေကောကြပြီမဟုတ်သောသူတို့က, ယနေ့အဘို့ငါသည်သင်တို့တစ်ပေးပါလိမ့်မယ်စေသည်နေ အတွေ့အကြုံတစ်ခုအမှတ်ရစရာတဦးတည်းလုပ်ရန်နှင့်ငါရှေ့ထိုင်ခုံနှင့်နောက်ထိုင်ခုံများတွင်လိင်များအတွက်အကောင်းဆုံးရာထူး share ကြလိမ့်မည် consejitos ။
တစ်ချိန်ချိန်သတင်းငါတို့သည်သူတို့သူကားမောင်းခဲ့သည်အဖြစ် fuck ဆိုတဲ့တစ်ဦးမောင်းသူအဖမ်းခံရပြီမြင်ကြပြီ။ ငါသည်သင်တို့နှင့်အခြားယာဉ်မောင်းနှစ်ဦးစလုံးကြောင့်အလွန်နေကြလို့ပဲဖြစ်နှင့်၎င်းတို့၏ဒေါက်ပေါ်တွင်ရဲများကအတူရုပ်ရှင်ချာလီရောင်ခံစားရနိုင်သည်ကိုနားလည်ပေမယ့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုပထမဦးဆုံး။ သင်ကားမောင်းခံစားရနှင့်ရုပ်ရှင်များတွင်တူသော fuck ဆိုတဲ့လိုပါကပိုကောင်းတဲ့ chroma ကိုအသုံးပြုပါ။
သင်တစ်ဦး exhibitionist င်သို့မဟုတ်အပြစ်ပေးခံရဖို့လိုခငျြမဟုတ်လျှင်ကျယ်ပြန့်နေ့၌၎င်း, မြို့အလယ်၌ကားအတွင်းပိုင်းအဘယ်သူမျှမ folles ။ သင်တစ်ဦးတည်းနှင့်အဆင်ပြေကြသည်ဘယ်မှာချောင်အရပ်သို့သွားရတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ လျှင် သင်သည် အဘယ်အရပ်မသိရပါဘူး မှ သွား. , အဲဒီမှာ ဖြစ်ပါတယ် တဲ့ web application ကိုခေါ်တော်မူ ငါ၏အ Picaderos ဘယ်မှာ သငျသညျ '' အားလုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာစေရငျးနှီးသောအရပ်တို့ကိုမထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကိုရှာဖွေကြည့် ကျော် အသုံးပြုသူများသူတို့ကိုယ်သူတို့နေဖြင့်ထည့်သွင်းစပိန်။
သငျသညျနေ့ကထိုသို့ပြုလျှင်အဝတ်နှင့်အတူပြတင်းပေါက်သို့မဟုတ်သမျှကိုသင်လက်ပေါ်တိုကိုဖုံးလွှမ်းရန်ရှိသည်ကြောင့်, အစားညအချိန်တွင်သင်အတွင်းပိုင်းအလင်းအိမ်မဖွင့်ကြပါလျှင်အကြှနျုပျအဘို့, ထိုကားထဲတွင် fuck ဆိုတဲ့ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်, ညအချိန်တွင်ဖြစ်ပါသည် ကားကိုသင်မြင်မှပိုခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုပထမဦးဆုံးတစ်ဦးထိတ်လန့်တားဆီးဖို့ဘာမှထက်ပိုအတွင်း၌တံခါးများသော့ခတ်လေ၏။
သင်folláisသို့မဟုတ် orgasm စဉ်အတွင်းနေချိန်မှာအော်ဟစ်သောသူတို့၏အမျိုးအမှန်လျှင်, မည်သူမဆိုတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်များနှင့်ကားကိုမှလာသည်ဟုယုံကြည်လျှင်ကြည့်ဖို့, သတိပြုရကြမည်။
အဆိုပါကား Kleenex တစ်သေတ္တာလက်ဖို့ရှိသည်အတူတူစိတ်အားထက်သန်တဲ့ညသွားသည်, မိမိအိမ်လျှင်သံကြိုးသယ်သင့်ပါတယ်အဖြစ်, ကောင်းစွာတပ်ဆင်ထားတဲ့ရမည်ဖြစ်သည်, ကွန်ဒုံးရှင်းလင်းပေးမှာ, ချောဆီကို ... သင်တစ်ဦး Folleti ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သေချာ သငျသညျကောင်းစွာတပ်ဆင်ထားတဲ့သွားပါ။
သင့်ရဲ့ picadero မတှေ့ဖို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစောင့်ရှောက်တာနဲ့ဒုတိယအနေဖြင့်ပထမဦးဆုံး folleteo အတွက်သက်သေအထောက်အထားသငျ့ရာအရပျစှနျ့ခှာဘယ်တော့မှမ။
သငျသညျညစ်ပတ်ချင်ကြပါဘူး အကယ်. သင့်ကားထိုင်ခုံတစ်စောင်သို့မဟုတ်ကြီးမားသောအထည်ပဝါသူတို့နှင့်အတူကိုဖုံးလွှမ်းရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်သင်ကားတစ်စီးစွန့်ခွာလျှင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဘောနက်နှင့်အတူမထိရန်ရှိခြင်းဧကန်အမှန်အအေးဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါအားလုံးလေးပေါ်တွင်တင်သို့မဟုတ်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌အပါးပျဉ်းပေါ်မှာထိုင်သောအခါ, ခံစားချက်မည်သူမဆိုဆန္ဒရှိမဟုတ်ဘူးသတိရပါ။ နွေရာသီအတွက်ကောင်းတဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်။
ကားထဲတွင်လိင်ဆက်ဆံအမြဲစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်, အင်ဂျင်နီယာများကြီးတွေကိုအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူကားထားရှိရန်အမှတ်တံဆိပ်, wifi, ဖန်သားပြင်, GPS, စိုးရိမ် ... ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမငွိမျဝနှစျသိမျ့ fuck ဆိုတဲ့ရန်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာပုံရသည်။ သို့သော်အသက်တာ၌အရာရာတူ, အလေ့အကျင့်အားဖြင့်သင်တို့ကိုလေ့လာပါ။ သင်လက်လွတ်သျောအဘယျအမှုကိုပွုဖြစ်ပါတယ်အစဉ်အမြဲလေ့လာသင်ယူဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါသည်သင်တို့ကိုဤအ pose တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကားထဲတွင် fuck ဆိုတဲ့ရန်အလေ့အကျင့်သို့ထားရန်ဖိတ်ခေါ်လို့ပြောပုံမှန်အားအဘယျသို့။ ဘေးကင်းလုံခြုံလိင်ပိုကောင်းပါလိမ့်မည်, ပျော်စရာနဲ့ပြုံးရယ်ရှိသည်, အပန်းဖြေ။
တခါတရံမှာကျွန်တော်တို့ဟာချင်ကြပါဘူး မှ fuck ဆိုတဲ့ (တစ်ခါတစ်ရံရှားရှားပါးပါး) ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအမြဲတမ်းအပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့ကိုတတ်နိုင်သမျှ တစ်ဦး '' apañito " ကျနော်တို့ vulgarly ဆိုသည့်အတိုင်း။
ကျနော်တို့ကကားထဲတွင် fuck ဆိုတဲ့သွားဖို့ရှိပါတယ်ပေမယ့်, ငါတို့နေသမျှကာလပတ်လုံးအဖြစ်လိုအပ်သောပဏာမမေ့လျော့လို့မရပါဘူး။ အဆိုပါ chupaditas ကျွန်တော်တို့ဟာဥပမာအားအမျက် (ယာကုပ် Schamus, 2016) အတွက်များစွာသောရုပ်ရှင်များတွင်မြင်ကြပြီရှေ့ထိုင်ခုံ၌ရှိကြ၏နေစဉ်။ ငါပြီးသားအကြံပြုသကဲ့သို့ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုအမြဲရပ်ထားခံရပါဘူး။
ဒါဟာခရစ်ယာန်သာသနာပြုများကဲ့သို့ပေမယ့်အနည်းငယ်အကွံနှငျ့အတူရှိလိမ့်မယ်။ ထိုမိန်းမသည်လျောင်းတော်မူအလယ်ထိုင်ခုံခရီးသည်တည်ရှိသည်နှင့်လူကိုအမြိုးသမီးမြား၏ခြေထောက်အကြားကြမ်းပြင်ပေါ်မှာခြေရင်း၏ထိပ်ပေါ်မှာရရှိသွားတဲ့။ သငျသညျသူ့ကိုန်းကျင်ကပိုသက်သာခံစားရအဖြစ်သူမသည်ကားကိုမြေပြင်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်တွင်သင်၏ခြေထောက်နေရာပေးနိုင်သည်။
ဒီအနေအထားဟောင်းရရှိသွားတဲ့ဘယ်တော့မှပုံရသည်။ ဒီနည်းလမ်းမိန်းကလေးထိုးဖောက်မှု၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူမျက်နှာတက်လဲလျောင်းနေသည်ဆိုပါကတံခါးကိုရိုက်ရာမှဦးခေါင်းတားဆီးပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ပါပြီတဲ့ခေါင်းအုံးတစ်ခုသို့မဟုတ်ခေါက်ဂျာကင်အင်္ကျီ, စောင် (အရာခပ်သိမ်းအဘို့အဖြေတစ်ခု) ကိုတင်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ် ။
ဒါဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် ဖို့ သငျသညျနောက်ကွယ်မှထိုးဖောက်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေ့ဆက်ပြီးမိန်းကလေးတစ်ဦး၏နောက်ကွယ်တွင်ရပ်နေ facing ကားတစ်စီးလူကိုကိုးစား, ကဖြစ်ပါတယ် နှစ်ဦးစလုံးအတွက်အသုံးပြု စအို ဒီမှာရွေးချယ်မှုဥစ္စာသည်, အင်္ဂါဇာတ်။ တစ်ခါတစ်ရံသင်ရှေ့ထိုင်ခုံကားကြမ်းပြင်ပေါ်မှာမဟုတ် caeros sujetaros မှရပါလိမ့်မယ်။
ထိုလူကသူ့ခြေထောက်အမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီနေချိန်မှာသူမကမျက်နှာဖွင့်အိပ်ရလိမ့်မယ်။ ဒီအနေအထားနှင့်ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်သောအရာဖြစ်ပါတယ် ထိုးဖောက်မှုပိုမိုနက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်နှစ်ဦးစလုံးအတှကျပျြောမှေ့စဖြစ်လိမ့်မည် ။
ငါသည်လူသာမန်ခံစားရတယ်နဲ့ကျွန်မသူ့ကိုစိုက်ကြည့်သူ့ကိုအပေါ်ဝတ်, ဒီအကြှနျုပျ၏အကွိုကျဆုံးရာထူးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မအထူးသဖြင့်ဒီအနေအထားများကဲ့သို့ငါလှုပ်ရှားမှု၏ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ပြင်းထန်မှုရှိသည်နှင့်သူခြော့နှင့်ကိုလျက်ငါ့ရင်နဲ့ကျွန်မခိုင်မြဲစွာကထည့်လေ့မရှိစဉ်ကိုငါ့မြည်းကိုဖမ်းပြီးနိုငျသောကွောငျ့။
နောက်ထပ်ဂန္, ထိုမိန်းကလေးကသူကိုထိုးဖောက်ဖို့နောက်ကွယ်မှရပ်အဖြစ်နောက်ဘက်ပြတင်းပေါက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ထိုင်ခုံပေါ်ဒူးထောက်ဆိုလိုတာပါ။ ကျွန်တော်တို့အရင်ကတောင်းသည်အတိုင်း, သင်ကြိုက်နှစ်သက်နေရာတိုင်းမှာသည် pussy သို့မဟုတ်မြည်းကိုအပျေါမှာထားနိုင်ပါတယ်။ ကောင်လေးကရင်သားဖမ်းပြီးနိုင်ပြီးဖြစ်စေသည့်အစေ့ကိုလှုံ့ဆော်နိုင်တာကြောင့်ဒီအနေအထားစံပြဖြစ်ပါတယ်။
ကားထဲတွင်လိင်အလွန်ဖန်တီးမှုရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုသုံးပါ, ကိုယ်ကိုကိုယ်ထုတ်ကြကုန်အံ့, ထိုအခိုက်ပျော်မွေ့။ အကောင်းတစ်ဦးတေးသံနှင့် fuck ဆိုတဲ့အပေါ်ထားပါ။
horny စဉ်ရယ်မောရလိင်ရယ်စရာရုပ်ရှင်7ပြကွက်များ